Icala loLwandle lweApartament ka-Ana
Wamkelekile kwiApartment kaAna. Le ndlu ibekwe kumbindi wedolophu kweyona ndawo ilungileyo yohamba elwandle ebizwa ngokuba yiLungomare. Ngaphezu koko, yimizuzu eyi-1 ukusuka e-Adriatic yolwandle kunye nemizuzu emi-5 ukusuka e-Ionian sea (ngemoto) kunye ne-10-15 min ngeenyawo. Le ndlu ibonelela nge-Air-Condition, iTV, iWi-Fi, igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela elinye, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ngemicrowave ngokunjalo ibandakanyiwe kwixabiso. Indlu isandula ukufakwa kwaye inombono omangalisayo ukusuka kwibalcony kulo lonke ulwandle lwe-Adriatic.
Indlu ka-Ana yindlu yokulala enye enendawo ye-65 square metres. Kule ndlu uya kufumana igumbi lokulala elinebhedi enkulu. Ngaphezu koko, kwigumbi lokuhlala uya kufumana ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile apho unokutyela khona. Ukongeza apha, igumbi lokuhlala linesofa, iTV ehlakaniphile kunye netafile. Kwiflethi uya kufumana i-balcony enombono omangalisayo kulo lonke ulwandle apho ungahlala khona kwaye ukonwabele isidlo sakho sakusasa.
P.S. Le ndlu ikumgangatho wesine wesakhiwo kwaye AYINAYO I-LIFT.
Ekubeni ibekwe kweyona ndawo ilungileyo yokuhamba ecaleni kolwandle, indawo yokuhlala ka-Ana iza nezinto ezininzi ezimangalisayo. Ngokuhamba ngomzuzu om-1 uya kukwazi ukuya kwivenkile yokutya, iivenkile zekofu ezimangalisayo, iindawo zokutyela, ii-pubs, icinema yehlobo, inkundla yebhasikithi, ikhemesti kunye neevenkile ezininzi zempahla.
Ngexesha lokuhlala kwakho mna nomyeni wam siya kuzama ukwenza konke okusemandleni ethu ukukubonelela ngokuhlala okubalaseleyo kunye namava. Siya kufumaneka imini yonke ukuba uya kuba nayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho. Nje ukuba ufikile siza kukunika inombolo yomnxeba apho unokuthi uqhagamshelane nathi nanini na.
Ngexesha lokuhlala kwakho mna nomyeni wam siya kuzama ukwenza konke okusemandleni ethu ukukubonelela ngokuhlala okubalaseleyo kunye namava. Siya kufumaneka imini yonke ukuba uya ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vlorë